Xukuumada China oo Pakistan ka caawinaysa la dagaalanka kooxaha Argagixisada. – SBC
Xukuumada China oo Pakistan ka caawinaysa la dagaalanka kooxaha Argagixisada.
Posted by editor on May 7, 2011 Comments
Dowlada China ayaa ka caawinaysa Pakistan sidii ay u heli lahayd tababaro iyo kaalmooyin casri ah oo ku aadan la dagaalanka waxa ay reer galbeedku u yaqaanaan Argagixisada.
China ayaa sheegtay mudo dheer in ay ku howl jirtay sidii ay tababaro usiin lahayd Pakistan,iyadoona haatan arinkaasi uusoo dadajiyay kadib dilkii hogaamiyaha Al qacida Sheekh Usama Bin ladin lagu dilay gudaha Pakistan.
China waxaa ay sheegtay in ay Nato iyo weliba dalalka kale ee ku howlan la dagaalanka Al qacida ay ku garabsiin doonto sidii loosoo afjari lahaa kooxhaasi,xili wadamo badan oo caalamka ah ay ka jirto cabsi ku aadan aargudashada ay ku dhawaaqeen Al qacida.
Sarkaal ka tirsan Dowlada China ayaa sheegay in dhinacooda ay ka cabsi qabaan in ay dhiiri galin ay helaan Islaamiyiinta galbeedka China,iyadoona sidoo kale ay ka baqayaan in Al qacida kasoo talaabtay Pakistan iyo India ay dalkooda usoo gudbaan.
Muslimiin fara badan ayaa ku nool galbeedka China,waxaana ay Dowlada Beijing kala kulmaan cadaadis,iyadoona mararka qaar ay isku dhacyo dhexmaraan iyaga iyo dadka kale ee Chines-ka ah,gaar ahaana haysta Diinta Budhistaha.